अष्ट्रेलियमा मनोजले देखाए परिवर्तित प्रचण्डको परिपक्व रुप – Akhabar Dainik
अष्ट्रेलियमा मनोजले देखाए परिवर्तित प्रचण्डको परिपक्व रुप
सिड्नी, असोज १९ । करिव दुइ हप्ता अस्ट्रेलिया बिताएका नेपालका लोकप्रिय हाँस्यकलाकार मनोज गजुरेल र गायिका इन्दिरा जोशीले यहाँका नेपाली सँग अमीट प्रेम बसाएका छन् । यहि अक्टोबर २ मा क्याम्सीको सुव्यवस्थित हलमा आयोजित बिशेष दसैँ साँझ कार्यक्रममा भव्य प्रस्तुती गरेका दुवै कलाकारले सोमबारको बिदाइ रात्रिभोजमा भने सबैलाई भावुक बनाए ।
आइतबारको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अहोरात्री खटेका स्वयम्सेवक, बिशेष सहयोगी संस्था, व्यक्ति र स्थानीय सञ्चार माद्यमहरुबिच आयोजित बिदाई भोज पनि उल्लेख्य नै भयो । जब कलाकार मनोज गजुरेल र इन्दिरा जोशीले समाजसेवी भावनाले आयोजित यस कार्यक्र मा आफ्ना प्रस्तुती राख्न पाउदा आफुहरु भाग्यमानी भएको बताए तब उपस्थित सबैले हर्षित मुद्रामा तालि पिटेर हल गुञ्जाए । हाँस्यकलाकार मनोज गजुरेलले आयोजक सस्था ब्रिज द ग्यापको सम्पर्कमा रहेर यस्तो समाजसेवी भावनाले सञ्चालित हुने कार्यक्रममा आफु संसारको जुनसुकै भागमा सहभागी हुन तयार रहेको बताए ।
दसैँको शुभकामना आदान प्रदान सँगै मनोज र इन्दिराको सिड्नी भ्रमणको मुख्य लक्ष भने समाजसेवा रहेको थियो । मनोज र इन्दिराको सिड्नी प्रस्तुतिको आयोजक संस्था ब्रिज द ग्यापले लम्जुङगमा पुननिर्माण गर्दै गरेको शारदा मा.बिका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने लक्ष पुरा भएको जनायो । यो कार्यक्रम लगतै उक्त सस्थाले निकट भविष्यमा सो बिद्यालयको गत सालको भुकम्पले क्षति गरेको ४ कोठे भवन मर्मत गर्ने, थप ४ कोठा निर्माण गर्ने र महिला, पुरुष गरी दुई शौचालय निर्माण गर्ने योजना सार्बजनिक गरेको छ ।
बिदाइ कार्यक्रममा ब्रिज द ग्यापका सल्लाहकार कृष्ण कुमार श्रेष्ठले आफुलाई यो कार्यक्रम पछी धेरै प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरुबाट बधाई तथा शुभकामना आइरहेको बताए ।
सिड्नीमा हाल सम्म आयोजित कार्यक्रमहरुमा आइतबारको कार्यक्रम फरक, सुव्यबस्थित र निकै रमाइलो भएको सहभागीहरुको मत थियो । सिड्नीमा आयोजना हुने कार्यक्रम यात निकै व्यवशायिक हुन्छन् या त पट्यारलाग्दा, तर आइतबारको कार्यक्रमको उद्देश्य नैं नेपालमा भूकम्पले नोक्सान पुगेको बिद्यालय भवन निर्माण गर्ने थियो । त्यसैले पनि होला उपस्थित हुनेहरुले आफ्नो ३० डलर लगानीको कार्यक्रम पछि पनि सदुपयोग हुने बिस्वास लिएका थिए ।
कार्यक्रममा युबा बिद्यार्थीहरु, व्यवशायीहरु, आफन्त भेट्न सिड्नी आएका अबिभावकहरु लगायत सैयौँको उपस्थिति थियो । ५० जना पाका पुस्ताका अविभावकका लागि टिकेट दर कम गरिएको थियो ।
मनोज गजुरेलको पहिलो प्रस्तुति परिवर्तित प्रचण्डको परिपक्व रुपले हाउसफुल हललाई पेटा मिचि मिचि खित्का छोड्न बाध्य बनायो ।. भाद्गाउँले टोपी, गम्छा, स्टकोट र कुर्ता सुरुवालमा दर्शकहरुकै बीचबाट मञ्चतर्फ अगाडी बढेका परिवर्तित प्रचण्ड रुपका मनोज गजुरेललाई दर्शक हरुले लामो तालि र हासोले स्वागत गरेका थिए । प्रचण्डको थेगो, पहिरन, जिउको हल्लाई सबै फरक बनाएका मनोजलाई दर्शकहरुले निकै रुचाएका थिए ।
क्रान्तिकारी गीतको गर्जन सँगै स्टेजमा आउने प्रचण्ड यहाँ त निर जहिले रिसाउने नि…. बोलको गित संगै थकित मुद्रामा उपस्थित थिए । सधै टाउको र कुम हल्लाउने प्रचण्ड यहाँ भने कुम भन्दा तल्लो भाग हल्लाइरहेका थिए । मनोजको व्याङ्ग्य थियो देउबा र मधेशको समर्थन पाएपछी प्रचण्डको टाउको थामियो तर तल्लो भाग उनैले हल्लाउन थाले । document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);